ज्योति मगरले ‘ऋषि धमलाजस्तै पोईको खोजीमा छु’ भनेपछि…(भिडियो सहित)
August 23, 2020 1335
चर्चित गायिका ज्योति मगरले आफू ग्ल्यावमर पेशामा भएकोले राम्री हुनको लागि मेक’अप गर्ने गरेको सुनाईन् । शनिबार राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भए को विशेष कराका:नीमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उ’नले यस्तो बताएकी हुन् ।
गायिका मगरले जान्न म त बुवा तिम्रो ज्वाँई’को घर, लाग्छ मलाई दुम्सी काँडे जुँ’गाको डर बोलको गीत गाएलगत्तै ‘पत्रकार धमलाले तपाई बुढो पोईको खोजीमा हुनुहुन्छ हो ? भनेर प्रश्न सोध्दा उनले भनिन्, हँहँहँ, तपाईँजस्तै ।
उनले को:मल वली, दिपाश्री निरौ’लाहरुको अगाडि आफू बच्चै भएको भन्दै बुढी नभए:को पनि जवाफ फर्का’एकी थिईन् ।
उनले आफू विवा:ह गर्ने त’यारी रहेको र उपयुक्त वरको खोजीमा रहेको जानकारी दिईन् । उनले आफूलाई मन पर्ने यु’वा पढेलेखेको हुनुपर्ने, हेर्दा राम्रो हुनुपर्ने र आफ्नो खुट्टामा उभिएको हुनुपर्ने च्वाईस सुनाईन् ।
गायिका मगरले ऋषि धमलाबारे यस्तो दोहोरी गाए’की थिईन् .हेर्नुहोस तलको रमाइलो भिडियो..रिपोर्टसनेपालबाट
Prevघट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार भयो आज ? हेर्नुहोस्
Nextदुबई एयरपोर्टमा अलपत्र नेपाली लिन नेपालबाट जहाज उड्यो, दुबई एयरपोर्टमा खुशीयाली (भिडियो सहित)
कम्मर`देखि माथिको भाग पुरै किरै`किरा ,यस्तो अवस्थामा भेटियो श`व (भिडियो सहित)